Goorma ayaa la cayrinayaan Macallinka Real Madrid ee Zinedine Zidane? … (Tababaraha bedelaya oo la sii ogaaday!) – Gool FM
Goorma ayaa la cayrinayaan Macallinka Real Madrid ee Zinedine Zidane? … (Tababaraha bedelaya oo la sii ogaaday!)
Haaruun February 1, 2021
(Madrid) 01 Feb 2021. Sida wararku ay sheegayaan waxaa bannaanka la soo dhigay Waqtiga la cayrin doono Macallinka Kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane, iyadoo sidoo kale la sii ogaaday tababaraha bedeli doona.
Los Blancosayaa haatan dhibaato dhexda kaga jirta, iyadoo Tababare Zidane uu noqonayo dhibcaha ugu weyn ee xaaladdaan, waxaana jirta cabsi badan oo ka jirta garoonka Bernabeu, taasoo la xiriirta in ceebta ka soo gaaraysa Real Madrid kooxaha kale ay noqoto mid sii socon doonta.
Sida warbixinta lagu sheegay Macallin Zidane ayaa shaqadiisa laga cayrin karaan todobaadkan haddii ay guuldarro ka soo gaarto Real Madrid kooxda Huesca ee ugu hooseysa horyaalka La Liga.
Shaqada loo doortay inuu bedelo Zidane waa macallinka waaya aragga ah ee Massimiliano Allegri, kaasoo sugaya wicitaanka Real Madrid.
Allegri waa shaqo la’aan tan iyo markii uu iska diiday qandaraas kordhinta kooxda Juventus bishii June ee sanadkii 2019-kii.
Maamulka sare ee Real Madrid ayaa si weyn u doonaya inuu isbedel dhaco kaddib guuldarradii dhowaan ka soo gaartay Levante iyo middii Copa del Rey ee ay kala kulmeen Alcoyani, taasoo dhaawac weyn u geysatay sumcaddii Zidane.
Allegri ayaa jeclaan lahaa inuu kooxda Los Blancos la wareego xilli ciyaareedka soo socda, balse haddii ay dantu keento waxa uu diyaar u yahay inuu shaqada haatanba la wareego, tiiyoo ay jirto suurtogalnimo ah in inta ka harsan xilli ciyaareedka uu shaqada kooxda sii buuxiyo tababaraha kooxda Real Madrid B ee Raul Gonzalez.
Antoine Griezmann oo aragti ka dhiibtay haddii ay soo qaban karaan Kooxda dhibcaha badan ku hoggaaminaysa horyaalka La Liga ee Atletico Madrid